I-china iphepha lempahla yomatshini ococekileyo oomatshini bokucoca umatshini kunye nabathengisi Oomatshini abazizityebi
Umatshini wePlastiki wePelletizing
Umatshini wePlastiki wokuCofa uMatshini
Shredder engatshatanga / ephindwe kabini
Umatshini wokuhlamba iimpahla wePlastiki
Umbhobho weplastiki / iiprofayili zokukhuphela umgca
umatshini wephepha umatshini wokucofa izinto
Lo matshini wamkela umgaqo wokucinezela amanzi emzimbeni, oko kukuthi ukucoca ifilimu yeplastikhi (ifilimu yeplastiki, ifilimu yeplastiki yezolimo, ibhegi ephothiweyo, ibhegi yolusu yenyoka, ibhegi yendawo, ibhegi yetoni, iplastiki yenkunkuma eneplastikhi yenkunkuma) ngokukhawuleza Isixhobo sokucudisa amanzi eplastiki.
Lo matshini wamkela umgaqo wokucinezela amanzi emzimbeni, oko kukuthi ukucoca ifilimu yeplastikhi (ifilimu yeplastiki, ifilimu yeplastiki yezolimo, ibhegi ephothiweyo, ibhegi yolusu yenyoka, ibhegi yendawo, ibhegi yetoni, iplastiki yenkunkuma eneplastikhi yenkunkuma) ngokukhawuleza Isixhobo sokucudisa amanzi eplastiki. Ifakwe isixhobo rotary iqhosha lemenyu, reducer ezizodwa, izixhobo oluzenzekelayo ngokupheleleyo ukufunxa kunye nkcenkce umboniso weplastiki, zeplastiki ezolimo umboniso mulch, ibhegi PP ephothiweyo, ibhegi ulusu inyoka, ibhegi isithuba, ibhegi ton, obhityileyo zeplastiki sheet inkunkuma zeplastiki, njl. Lo matshini wamkela umgaqo wokucinezela ukungabikho komzimba kwaye uxhotyiswe ngesixhobo sokujikeleza ukujikeleza kunye nokuhambisa umboniso weplastiki kwifilimu. Ukuxinana kunye nokusebenza kakuhle emzimbeni kuyakhawuleza kwaye umphumo ulungile. Lo matshini kulula ukusebenza, ukucudisa kunye nokuphelisa amanzi emzimbeni kunokufikelela ngaphezulu kwe-95%, kwaye imveliso inokwenziwa ngokwezifiso ngokweemfuno zabathengi.
1. Umgaqo okhethekileyo wokucinezela amanzi emzimbeni usombulula ingxaki enzima yokuphela kwamanzi emzimbeni njengeplastiki;
2. Umphumo wokucwina: ungaphezulu kwama-95% aqinisekisiweyo;
3. Itekhnoloji yaseTaiwan, eyenziwe eTshayina, yonga imali kakhulu;
4. Ukupheliswa kwamanzi emzimbeni, xa kuthelekiswa nokomisa umoya wokuqala oshushu, konga amandla kakhulu;
Olu luhlobo olutsha lomatshini weplastiki, okhethekileyo wokurisayikilishwa kweplastikhi kunye nelayini yokuhlamba, inokuthi ithathe indawo yomatshini wamanzi amdaka, umatshini wokomisa, emva kokuba umboniso bhanyabhanya uphume ekuhlambeni okuphezulu kwembambano. Xa usenza iigranuce, ayifuni icompactor. Uya konga iindleko zomatshini kunye namandla kwaye kulula ukulawula.
Izimvo zoyilo ngokubanzi ezinje ngezantsi:
1.ukucofa umphanda womatshini akukho mfuneko kunyango nge-38Crmoal, kuba inxenye ye-fricton isentloko.
Kodwa kufuneka unyango olushushu. (Ukufudumeza inxenye ngama-38Crmoal)
2.squeezing umatshini uyilo umphanda, phezu komhlaba, umphanda uya kuba drill imingxuma ezincinane ngakumbi. Ngaphakathi umngxuma malunga 3mm, ngaphandle malunga 6mm.
Ke olu luyilo lunokuqinisekisa ukuba alubambeki kwizinto xa kukho uxinzelelo oluphezulu ngaphakathi.
I-3 ngaphakathi ngaphakathi komatshini wokucofa umgqomo unee-pcs ezi-5 eziphambili, (umfanekiso ngu-300 uhlobo, unee-6 ii-pc Keyway),
lo msebenzi we-Keyway uqinisekisa ukwenza i-rawmaterial push phambili ngesikere.
4.umatshini wokucinezela Isikripthi somatshini kufuneka sibe yi-38Crmoal, rigidy high, ukumelana ne-abrasion elungileyo.
5.squeezing uyilo isikrufu uyilo NGABABINI-IN-ONE, usebenzisa iindleko zisezantsi
Imingxuma 6.the sokubumbela kumatshini ukucudisa kunokuba adjustable
ukuba iinkcukacha ezinomdla, nxibelelana no info@zjgrcmc.com
Okulandelayo: Umatshini wokudibanisa umatshini wokudibanisa
umatshini wokucoca ifilimu
Ubisi lwe-PE lobisi olucofa umatshini
Akukho nkqubo yokusika ifinya kumatshini
300kg / h iingxowa ephothiweyo ukucoca umatshini
Umatshini wokucoca umboniso we-300kg / h
Umatshini wokucinezela ifilimu u-PE / PP
UYA ITORUI YAKHO